Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Grand Canyon Jewels: El Tovar Hotel iyo Hopi Gift Shop
Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Boqol iyo lix iyo toban sano ka hor, laba jahawareer oo dhisme ah ayaa laga furay Beerta Qaranka ee Grand Canyon: 95-qol ee El Tovar Hotel iyo Dukaanka hadiyadaha ee Hopi House. Labaduba waxay ka tarjumayeen aragtida fog iyo hal-abuurka ganacsi ee Frederick Henry Harvey kuwaas oo ganacsigooda ay ka mid yihiin makhaayado, hudheelo, baabuur lagu cunteeyo tareenada, dukaamada hadiyadaha, iyo xarumaha wargeysyada.
Iskaashiga uu la leeyahay Atchison, Topeka iyo Sante Fe Tareenka wuxuu soo bandhigay dalxiisayaal badan oo cusub Koonfur-galbeed ee Ameerika isaga oo ka dhigaya safarka tareenka iyo qadada raaxo iyo xiiso leh. Shaqaalaysiinta farshaxanno badan oo Mareykan ah, shirkadda Fred Harvey waxay sidoo kale soo aruurisay tusaalayaal dambiilaha wadaniga ah, shaqada birta, caruusada kachina, dheryaha, iyo dunta. Harvey waxaa loo yaqaanay "Civilizer of the West."
Muddo dheer ka hor intaan Congress-ka Maraykanku magacaabin Xadiiqadda Qaranka ee Grand Canyon sannadkii 1919kii, dalxiisayaashii ugu horreeyay waxay ku yimaaddeen stagecoach waxayna ku hoydeen teendhooyin, qolal, ama hoteello ganacsi oo hore. Si kastaba ha noqotee, markii Atchison, Topeka iyo Sante Fe Tareenka ay si toos ah u fureen si toos ah South Rim ee Grand Canyon, waxay abuurtay yaraanta hoy ku filan. Sanadkii 1902, Sante Fe Tareenku wuxuu wakiishay dhismaha El Tovar, oo ah hudheel afar dabaq ah oo heerka koowaad ah oo uu naqshadeeyay naqshadeeyaha Chicago Charles Whittlesey oo leh ku dhawaad ​​boqol qol. Hoteelka ayaa dhismihiisa ku kacay $250,000 wuxuuna ahaa hoteelka ugu quruxda badan galbeedka Wabiga Mississippi. Waxaa loo magacaabay "El Tovar" oo lagu sharfayo Pedro de Tovar ee Safarka Coronado. Inkasta oo uu huteelka leeyahay qaab-dhismeed aad u qurux badan, haddana waxa ku jiray dab-dhaliye dhuxul-dhaliye ah oo ku shaqaynaya laydhadhka koronto, kulaylka uumiga, biyaha kulayl iyo qabow iyo tubooyinka gudaha. Si kastaba ha ahaatee, mar haddii qolalka martida midkoodna uusan lahayn musqul gaar ah, martida waxay isticmaaleen musqul dadweyne oo ku yaal mid kasta oo ka mid ah afarta dabaq.
Hudheelku waxa kale oo uu lahaa guri lagu beero khudaar iyo miro daray ah, guri digaag ah iyo xayn caano ah oo caano cusub laga heli jiray. Astaamaha kale waxaa ka mid ahaa timo-jare, solarium, beerta saqafka sare leh, qolka billiardka, qolalka fanka iyo muusiga iyo adeega telegaraafka Western Union ee ku dhex yaal hoolka.
Hudheelka cusub ayaa la dhisay ka hor inta aan Grand Canyon noqonin baarkin qaran oo federaal ah oo la ilaaliyo ka dib booqashadii Madaxweyne Theodore Roosevelt ee 1903 ee Canyon. Roosevelt wuxuu yiri, "Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo inaad sameyso hal shay oo la xiriira dantaada iyo danta dalka - si aad u ilaaliso yaababkan weyn ee dabiiciga ah sida ay hadda tahay ... Waxaan rajeynayaa inaadan lahaan doonin dhismo nooc kasta, ma aqal xagaaga, hotel ama wax kale, si ay u xumeeyaan weynaanta cajiib ah, sarraysa, jacaylka weyn iyo quruxda Canyon ah. Iska daa sida ay tahay. Ma horumarin kartid.”
Makhaayadaha Fred Harvey waxaa la dhisay ku dhawaad ​​100 mayl kasta oo ku teedsan Waddada Tareennada ee Sante Fe ee dhexmarta Kansas, Colorado, Texas, Oklahoma, New Mexico iyo California. Waxa uu ka shaqaaleysiiyay maqaaxiyadiisii ​​iyo hudheeladiisa "Hablaha Harvey", dumarka da'da yar ee laga shaqaaleysiiyay Maraykanka oo dhan iyagoo leh "dabeecad wanaagsan, ugu yaraan waxbarashada fasalka sideedaad, akhlaaq wanaagsan, hadal cad iyo muuqaal hufan." Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa markii dambe guursaday xoolo dhaqato iyo cowboys waxayna u bixiyeen carruurtooda "Fred" ama "Harvey". Majaajiliistaha Will Rogers wuxuu ka yiri Fred Harvey, "Wuxuu ku ilaalin jiray galbeedka cuntada iyo haweenka."
El Tovar waxaa la galiyay Diiwaanka Qaranka ee Goobaha Taariikhiga ah Sebtembar 6, 1974. Waxaa lagu dhawaaqay inay tahay Taariikh Qaran May 28, 1987, waxayna xubin ka tahay Hudheelada Taariikhda ee Ameerika tan iyo 2012. Hoteelku wuxuu martigeliyay nalalka sida Albert. Einstein, Zane Gray, Madaxweyne Bill Clinton, Paul McCartney, iyo kuwo kale oo badan.
Dukaanka hadiyadaha ee Hopi House (1905) waxaa loo dhisay in lagu dhex daro deegaanka deriska ah waxaana loo qaabeeyey guryaha Hopi pueblo kuwaas oo u adeegsaday dhismooyinkooda agab dabiici ah sida dhagax ciid iyo juniper. In kasta oo El Tovar ay u diyaarisay dhadhamin heersare ah, Hopi House waxa uu matalay xiisaha Koonfur-galbeed ee fanka iyo farshaxanka ay dhiirrigeliyeen Shirkadda Fred Harvey iyo Sante Fe Tareennada.
Hopi House waxaa nashqadeeyay naqshadeeye Mary Jane Elizabeth Colter oo la bilaabay urur ay la lahayd Shirkadda Fred Harvey iyo Adeegga Beerta Qaranka oo socday in ka badan 40 sano. Waxa loo nashqadeeyey oo loo dhisay meel lagu iibiyo farshaxanimada Hindida. Waxay caawimo ka codsatay fannaaniinta Hopi ee tuulooyinka u dhow si ay gacan uga geystaan ​​dhismaha. Colter wuxuu hubiyay in gudaha gudaha uu ka tarjumayo qaababka dhismaha Pueblo ee deegaanka. Daaqadaha yaryar iyo saqafyada hoose waxay yareeyaan iftiinka qoraxda ee saxaraha ah waxayna siiyaan dareen qabow oo raaxo leh gudaha. Dhismaha waxaa ka mid ah meelaha darbiga ah, meelaha dabka laga shido ee geesaha ah, darbiyada adobe, rinjiyeynta ciid Hopi iyo meesha allabariga. Shiilada waxaa laga sameeyaa weelal dhoobo ah oo jajaban oo la isku dhejiyay oo la isku daray.
Markii dhismuhu furmay, dabaqa labaad waxa uu soo bandhigay bustayaal duug ah oo Navajo ah, kuwaas oo ku guulaystay abaal-marintii waynayd ee 1904tii St. Louis World Fair. Bandhigani wuxuu aakhirkii noqday Fred Harvey Fine Arts Collection, oo ay ku jiraan ku dhawaad ​​5,000 oo xabbo oo farshaxanka Maraykanka ah. Ururinta Harvey waxay soo booqatay Maraykanka, oo ay ku jiraan goobo sharaf leh sida Matxafka Field ee Chicago iyo Matxafka Carnegie ee Pittsburgh, iyo sidoo kale goobo caalami ah sida Matxafka Berlin.
Hopi House, waagaas iyo hadda, waxay bixisaa farshaxanno iyo farshaxanno kala duwan oo Mareykan ah oo iib ah: dheriyo iyo alwaaxyo lagu hagaajiyay miisasyo lagu dejiyey bustayaal Navajo ah oo gacan togan iyo roogagyo, dambiisha laga soo laadlaadsan yahay alwaaxyo-dhoobo ah, caruusadaha kachina, maaskaro xafladeed, iyo alwaax xardho ay iftiimiyeen iftiinka suufka ee daaqadaha yaryar ee qaab-dhismeedka. Muraayad Hopi ah waxay qurxiyaan darbiyada jaranjarada, iyo farshaxanada diineed waa qayb ka mid ah qolka macbadka.
Shirkadda Fred Harvey ayaa ku casuuntay farsamayaqaannada Hopi si ay u soo bandhigaan sida ay u sameeyeen dahabka, dhoobada, bustayaal, iyo alaab kale oo markaas iib lagu iibin doono. Bedelkeeda, waxay heleen mushahar iyo hoyga Hopi House, laakiin waligood wax lahaanshaha Hopi House kamay helin oo dhif iyo naadir looma ogola inay alaabtooda si toos ah uga iibiyaan dalxiisayaasha. Dabayaaqadii 1920-meeyadii, Shirkadda Fred Harvey waxay bilawday inay u ogolaato qaar ka mid ah Hopi Indians inay galaan xilalka mas'uuliyadda ganacsiga. Porter Timeche waxa loo shaqaaleysiiyay inuu soo bandhigo tolnimada bustaha laakiin aad ayuu u jeclaa inuu la sheekeysto dadka soo booqda taasoo keentay in marar dhif ah uu dhameeyo buste si uu u iibiyo, markaas ayaa loo soo bandhigay shaqo iibiye ah dukaanka hadiyadaha ee Hopi House. Ka dib wuxuu u adeegay sidii iibsadaha Fred Harvey tanaasulaadyada Grand Canyon. Fred Kabotie, fannaanka caanka ah ee ku rinjiyeeyay sawirka Hopi Snake Legend gudaha gudaha Desert View Tower, wuxuu maamulay dukaanka hadiyadaha ee Hopi House bartamihii 1930-meeyadii.
Laga soo bilaabo caan ka ah Hopi House dad badan oo soo booqda ayaa laga yaabaa inay u maleynayaan in Hopi ay yihiin qabiilka kaliya ee u dhashay Grand Canyon, laakiin tani waa mid ka fog runta. Dhab ahaantii, maanta 12 qabiil oo kala duwan ayaa loo aqoonsaday inay xiriir dhaqameed la leeyihiin Canyon, Adeegga Beerta Qaranka ayaa ka shaqeynayay sidii loo dabooli lahaa baahiyaha dhaqameed ee kooxahan kale sidoo kale.
Guriga Hopi waxaa loo qoondeeyey Astaanta Taariikhiga ah ee Qaranka 1987. Intii lagu guda jiray dib u cusboonaysiinta dhamaystiran ee 1995, la taliyayaasha Hopi ayaa ka qayb qaatay dadaalka dib u soo celinta waxayna gacan ka geysteen hubinta in mid ka mid ah naqshadaha asalka ah ama naqshadaynta aan la bedelin. Hopi House iyo Lookout Studio waa dhismayaal wax ku biirinaya oo ku yaala Grand Canyon Village Historic Landmark District.
Stanley Turkey waxaa loo aqoonsaday inuu noqdo taariikhyahan sanadka sanadka 2020 hoteelada taariikhiga ah ee America, barnaamijka rasmiga ah ee National Trust for Historic Preservation, kaas oo horey loogu magacaabay 2015 iyo 2014. Turkel waa lataliyaha hoteelada ee sida weyn loo daabaco ee Mareykanka. Wuxuu ku shaqeeyaa tababarkiisa la-talinta hudheelka isaga oo u adeegaya markhaati khabiir ku ah kiisaska la xiriira hudheelka, wuxuu siiyaa maareynta hantida iyo la-tashiga hudheellada hudheellada. Waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay Master Hotel Supplier Emeritus oo ay soo saartay Machadka Waxbarashada ee Hoteelka iyo Hoteelka Mareykanka. [emailka waa la ilaaliyay] 917-628-8549
Buuggiisa cusub ee "Great American Hotel Architects Volume 2" ayaa hadda la daabacay.
Buugaagta Kale ee La Daabacay:
• Huteellada Weyn ee Ameerika: Horjoogayaasha Warshadaha Hoteelka (2009)
• La Dhisay Ilaa Ugu Dambeyn: 100+ Huteelo Sannad-jir ah oo ku yaal New York (2011)
• La Dhisay Ilaa Ugu Dambeyn: 100+ Hoteelo Jir-Sannado Ka Weyn Bariga Mississippi (2013)
• Mavens Hotel: Lucius M. Boomer, George C. Boldt, Oscar ee Waldorf (2014)
• Huteellada Weyn ee Ameerika Volume 2: Horjoogayaasha Warshadaha Hoteelka (2016)
• La Dhisay Ilaa Ugu Dambeyn: 100+ Huteel-Jir-Jireedka Galbeedka Mississippi (2017)
• Dhismayaasha Huteel Weyn ee Ameerika Volume I (2019)
• Mavens Hotel: Volume 3: Bob iyo Larry Tisch, Ralph Hitz, Cesar Ritz, Curt Strand
Dhamaan buugaagtaan waxaa laga dalban karaa Qoraaga Guryaha adoo booqanaya stanleyturkel.com oo gujinaya cinwaanka buugga.